I-Villa Victoria: igumbi le-3.5 kwigumbi eliseNairs, eScuol
UMartina unezimvo eziyi-553 zezinye iindawo.
Igumbi le-3.5 legumbi kwi-Villa Victoria yembali: Indlu ibekwe ngokuthe ngqo kwi-Inn kunye nokukhawuleza okuzinzileyo komlambo kunye nokuzola kwemvelo kuqinisekisa ukuhlala ngokukhululeka. Kwindawo ekufutshane kukho imithombo ye-3 yamaminerali kunye neziko lenkcubeko ye-Fundaziun Nairs - indlu yomculi enenani eliqhelekileyo lemiboniso yobugcisa. Ukuhamba ngeenyawo okanye ukuhamba ngebhayisikili kunokuqalwa ngokuthe ngqo endlwini. Inxalenye yeNairs yelali yimizuzu emi-2 kuphela ngemoto ukusuka eScuol.
Kwindlu eqaqambileyo kunye nebanzi (85 m2) unokonwabela iiholide zakho macala onke. Kwimbali yeVilla Victoria unokuziva ufana noKumkanikazi uVictoria, kodwa ngaphandle kokujonga intuthuzelo yanamhlanje. Onke amagumbi abanzi kwaye aqhakazile ngombono wegadi yasendle kunye neyothando okanye i-Inn. Ikhitshi elivulekileyo lineoveni, isitovu seceramic, ifriji enendawo yesikhenkcisi kunye nemenzi yekofu.
• Igumbi lokuhlala / lokutyela elinetafile enkulu yokutyela, isofa kunye nescreen esisicaba (i-HDMI-iyakwazi, akukho nxibelelwano lweTV)
• Amagumbi okulala ayi-2 lilinye elinebhedi ephindwe kabini (160x200 cm) kunye nebhedi enye (90 x 200 cm)
• Ikhitshi ineoveni, isitovu seceramic, ifriji enendawo yesikhenkcisi kunye nemenzi yekofu.
• Iseti ye-Fondue kunye ne-oven ye-raclette ziyafumaneka
• Igumbi lokuhlambela elinebhafu
• Onke amagumbi anekhaphethi.
• Iwasha kunye nesomisi kumgangatho omnye (kwabelwana nenye indlu).
• I-ski eqhelekileyo kunye ne-cellar yebhayisekile
• Indawo yokupaka ngaphandle
• Izixhobo zabantwana (itafile yokutshintsha, isitulo esiphakamileyo) kunye nezinto zokudlala ezahlukeneyo
• Isikhululo sokudlala seSikolo esiDala (PS2)
• Ukufikelela kwigumbi elingaphantsi komhlaba elincinane elinamatye
• Igadi yehotele edityanisiweyo nayo isenokusetyenziswa ngolwazelelelo olufanelekileyo kwiindwendwe zasehotele
Indlu eyi-85 m2 ibekwe kumgangatho we-2 (phezulu) weVilla Victoria. I-villa ibekwe ngendlela ekhohlakeleyo yothando ngokuthe ngqo kwiindonga ze-Inn. Indawo yasendle ye-Lower Engadine inika umdla ngokujonga konke. Kude nendawo ephithizelayo, le ndlu yeyona ndawo ifanelekileyo yokuphumla okanye ukuqala uhambo kwaye ilungele iintsapho kunye neendwendwe ezinomdla kwinkcubeko, imbali kunye nendalo.
I-Villa Victoria (ngelo xesha eyayibizwa ngokuba yi-Villa Kurhaus) yakhiwa ngo-1874 njengesebe le-Hotel Kurhaus kanye kufuphi nomnyango - ngumyili wezakhiwo waseSwitzerland owaziwayo owakha phantse yonke i-palazzo yezidwangube zaseRashiya eSt. I-villa yayisetyenziselwa ukuhlalisa iindwendwe ezikhethekileyo zehotele - oku kuthetha kakhulu, kuba imiqolo yeentloko zesithsaba sesiqingatha seYurophu yafika yangena kwihotele esecaleni.
Amarhe kukuba uKumkanikazi uVictoria wayehlala apha (kungoko igama elithi Villa Victoria). Kwaye ngobusuku obuzolileyo benyanga epheleleyo usenokubona umzobo omde ka-John Brown, umkhonzi waseSkotlani ozinikeleyo ka-Queen Victoria, ejikeleza i-villa ukuze asike iintyatyambo zakhe uKumkanikazi. Oh Kulungile. Oko akungqinwa ngokwenzululwazi. Yintoni eqinisekileyo, nangona kunjalo, kukuba namhlanje abo bafuna i-adventure kunye nokuphumla, kunye neentsapho nazo, zamkelekile eVilla Victoria. Kwaye ukuba amehlo abantwana babo Villa Victoria kusenokwenzeka ngakumbi ukubona Villa Kunterbunt.
Kwindawo ekufutshane kukho imithombo ye-3 yamaminerali kunye neziko lenkcubeko ye-Fundaziun Nairs - indlu yomculi enenani eliqhelekileyo lemiboniso yobugcisa. Ukuhamba ngeenyawo okanye ukuhamba ngebhayisikili kunokuqalwa ngokuthe ngqo endlwini.